Beer ၊ ၀ီစကီ ၊ ၀ိုင် နှင့် မြန်မာ မိန်းမများရဲ့ စာရိတ္တ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » Beer ၊ ၀ီစကီ ၊ ၀ိုင် နှင့် မြန်မာ မိန်းမများရဲ့ စာရိတ္တ
Beer ၊ ၀ီစကီ ၊ ၀ိုင် နှင့် မြန်မာ မိန်းမများရဲ့ စာရိတ္တ
Posted by etone on Sep 12, 2011 in Community & Society, My Dear Diary, Opinions & Discussion, Think Different | 55 comments
ဒီနေ့မနက် ဂရုမေးလ် တစ်ခုကနေ ၀င်လာတဲ့ အကြောင်းရာလေး ဖတ်ပြီး သဘောကျမိတယ်… ။ စာပြန်ရေးလျှင် ပါ့ဘလစ် မေးလ်ဖြစ်မယ်ဆိုတာ သိပေမဲ့… ပြောချင်စိတ် မထိန်းနိုင်တဲ့ အတွက် စာရေးမိလိုက်ပြန်တယ် … ။ ဒီဆိုက်ထဲမှာလည်း အဲ့ဒါလေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးနည်းနည်းဆွေးနွေးကြည့်ရအောင်နော် …။
မူရင်း ရေးသားသူကတော့ … ယောကျာ်းလေးမို့ ယောကျာ်းလေးဘက်က အမြင်နဲ့ ရေးခဲ့တာပါပဲ … သူရေးထားတာ အကျဉ်းလေးကတော့ … သူနဲ့ ခင်တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့ စင်တာတစ်ခုမှာ အမှတ်မထင်ပြန်ဆုံမိတယ်… ဆုံရင်း ထိုအမျိုးသမီးရဲ့ အပြုမူက ရဲတင်းတယ်ပေါ့ .. ဘီယာမူးနေတာကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ … သူကပဲ မူးနေတဲ့အမျိုးသမီးကို ထိန်းကျောင်းပေးရင်း … အမျိုးသမီးနဲ့ ချိန်းထားတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို စောင့်ပေးခဲ့တယ် … လာတဲ့ သူငယ်ချင်းဆိုသူတွေကလည်း အမျိူးသား နှစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး … မေးခွန်းစာရွက်ဆိုလား ဘာလားမသိတဲ့စာရွက်လာပေးပြီး ပြန်သွားခဲ့တယ်… ဒီအမျိုးသမီးကို ကြည့်ရင်း သူလည်း ဂရုဏာဒေါသဖြစ်မိတယ်ပေါ့ … သူသာ တဏှာရူးလို လူစားမျိုးဆို မလွယ်ဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်းလေး ရေးပြထားပါတယ် … ။ ဒါပြင် ဒီအရက်မူးနေတဲ့ အမျိုးသမီးက သူ့နောက်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ချိန်းထားတယ်ဆိုတဲ့ ဆိုင်ကိုလည်း လိုက်ပို့ခဲ့ပေးရကြောင်း ၊ ဆိုင်မှာလည်း …သူလို မူးနေတဲ့ မိန်းကလေး သူငယ်ချင်းတွေကြား … ယောကျာ်းလေး သူငယ်ချင်းအနည်းငယ်ကိုလည်း တွေ့ရကြောင်း ရေးသား ထားခဲ့ပြီး … ပြန်တဲ့လမ်းမှာ စိတ်ပူ အတွေးများ ခဲ့ကြောင်း ရေးသားထားပါတယ် … ဒါပြင် မိန်းကလေးတွေ ဒီလိုဖြစ်နေတာကို အောက်ပါအချက်တွေနဲ့ အသေးစိတ်ဝေဖန်ပြသွားခဲ့ပါတယ် … ။
((((၁)အရက်၊ဘီယာ ကို လွယ်လွယ်ဝယ်ယူရနေခြင်း (၂)နိုင်ငံခြား ရုပ်သံမှ အတုခိုးမှားခြင်း (၃)မိဘ ပြည်သူများက လျှစ်လျှူ ရှူ့လွန်းခြင်း (၄)နိုင်ငံအစိုးရက အရက်၊ ဘီယာများကို အခွန်မတင်းကျပ် ခြင်း (၅)မိန်းကလေးများ မှ ယောကျာ်းလေးများ ကို ခွာယာတိုင်းခြင်း တို့ ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။ )))
သူက သူ့အမြင်နဲ့ … မြန်မာမိန်းမတစ်ယောက် ဘီယာ၊ အရက်သောက်တာမျိုးကို မကြိုက်တဲ့အကြောင်း ဝေဖန်ပြသွားပါတယ် … ။
ကျွန်မကလည်း မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ အမြင်နဲ့ …ပြန်လည် ဆွေးနွေးပြခဲ့ပါတယ် .. ။
ကျွန်မတို့ နိုင်ငံမှာ ဗိုင်းကောင်းကျောက်ပိ ဆိုတဲ့ စကားကို .. ရှေးယခင် ဘိုးတော်ဘုရားလေးဘက် သွားစဉ်ထက် စောစီးစွာ ပြောဆို လက်ခံ ကျင့်သုံးခဲ့ကြတယ်နော် … ။အဓိပ္ပါယ်ကတော့ … အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ …. ။ ရှေးအစဉ်ဆက် မိန်းကလေးဆိုလျှင် ပိပိရိရိနေ ၊ အိနြေ္ဒရရ နေမှ ၊ လူကြီးသူမတွေရဲ့ … အဆုံးမအတိုင်း ချို့ယွင်းချက်မရှိ (ပြန်လည် ချေပ ဆွေးနွေးခွင့်မရှိပဲ) နေမှ အဖိုးတန်တယ် … တန်ဖိုးရှိတယ် ဆိုတာမျိုး လက်ခံကျင့်သုံးခဲ့ကြတယ် …။ မိန်းမတွေကို အိမ်တွင်းအောင်း အဖြစ်သာ ထားခဲ့ပြီး … မီးဖိုချောင်အလုပ်တွေနဲ့ပဲ ကျင်လည်စေခဲ့တယ် … ။အိမ်မှူကိစ္စအ၀၀ နဲ့ လင်ယူသားမွေး ၊ သားသမီးထိန်းကျောင်းရတာတွေဟာ အဓိက အလုပ်လိုလုပ်ခဲ့ကြရတယ် … တနည်းအားဖြင့် ဖိနှိပ်ခံ မိန်းမများရဲ့ ဘ၀ဟာ ပြန်လည် ဆွေးနွေးခွင့်မရပဲ …တဆင့်နိမ့်ဆက်ဆံခဲ့ပါတယ်… ။သေစာ ရှင်စာလောက်သာ သင်ကြားခွင့်ရပြီး အပြင်ထွက်အလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုတာမျိုး အိပ်မက်တောင် မက်ခွင့်မရှိတဲ့ ဘ၀မျိုးထိ ရောက်ခဲ့ကြတယ်လေ … ။ ဒါကြောင့်လည်း အိမ်တွင်းမှာနေပြီး ဗဟုသုတမရှိ မျက်စိပိတ် နားပိတ်နဲ့ … အချိန်တွေ ကုန်ခဲ့ရတယ်… ။
နှစ်ပေါင်းကြာရှည်သည့်တိုင်အောင် ထို အယူဆတွေ ပတ်ချာလည်နေခဲ့ရတဲ့ ကျွန်မတို့ ၀န်းကျင်မှာ လူအတော်များများ ဒီအယူဆတွေ စွဲကိုင်ထားတုန်းပဲလေ …. ။ဘာမဟုတ်တဲ့ အစားသောက် ကိစ္စမှာတောင် ဇီဇာကြောင်စွာနဲ့ … ယောကျာ်း မိန်းမ ခွဲခြားမှူက ရှိနေတုန်းပဲ … ။ မိန်းမတွေ အရက် ၊ဘီယာ မသောက်ရပါဘူးလို့ … ဘယ်အရက်ချက်စက်ရုံ ၊ ဘီယာစက်ရုံကမှ မတားမြစ်ထားပါဘူး …… ။ အသက်ရွယ်ပြည့်သူတိုင်း …သင့်တင့်တဲ့ တန်ဖိုးပေးပြီးလျှင် အရက်၊ဘီယာ ၀ယ်သောက်လို့ရပါတယ် … ။ မိန်းမတွေ အိမ်တွင်းအောင်း နေခဲ့စဉ်ကတည်းက အရက်ဆိုတာ ယောကျာ်းတွေနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အရာဆိုတာမျိုး လှေနှံဓါးထစ် စွဲခဲ့ကြတာမို့ … အခုထိတိုင် … အယူဆစွဲ သက်ရောက်မှူကလည်း ရှိနေပြန်သေးတယ် … ။ အရက် ၊ ဘီယာ သောက်တဲ့ မိန်းမက အရှက်မရှိဘူး ဖြစ်သွားပြီလား …အကျင့်စာရိတ္တပျက်ပြားနေလို့ ယူဆလို့ရမလား … ။ သုံးစားလို့မရတဲ့ ဇာတ်ပျက်စာရင်းဝင်သွားပြီလား … ။ (မိန်းမ)လူတစ်ယောက်ရဲ့ စာရိတ္တကို အရက်သောက်တတ်တာ ၊ဘီယာသောက်တတ်တာနဲ့ ယှဉ်ပြီး ဆုံးဖြတ် ဝေဖန်လို့ မရပါဘူး … ။ အရက်မသောက်ပဲ အမှောင်ထုရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ပျက်လိုပျက်ဆီးဖြစ်နေတဲ့ အရွယ်ကောင်းအမျိုးသမီးတွေ ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ … ။ အရက်သောက်တတ်တဲ့ မိန်းမတွေကို ပုတ်ခတ်ပြောဆိုနေတဲ့ ယောကျာ်းတွေကသာ … ယောကျာ်းတန်မဲ့ သူများကိစ္စ စပ်စုလို့ ရှက်စရာကောင်းတာပါ … ။ အစားသောက်နဲ့ ပတ်သတ်လို့ … ဇီဇာကြောင်တဲ့လူမျိုးပါပဲ …။ လူမြင်ကွင်းမှာ လူတွေသောက်တဲ့ ဘီယာ ၊၀ီစကီ ၊၀ိုင်သောက်တာ …. ရှက်စရာကိစ္စမှ မဟုတ်တာပဲ … ။ တစ်ခုတော့ရှိတယ် … ကိုယ်လက်ခံသောက်သုံးနိုင်တဲ့ ပမာဏတော့ ချင့်ချိန်ရမှာပေါ့ … ။ အလွန်အကျွံသောက်သုံးမိပြန်လျှင်လည်း …. အသိတရား လျှော့ပါးလာတတ်တာမို့ … မလိုလားအပ်တဲ့ …နောက်ဆက်တွဲ….ပြသနာတွေလည်း ဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ် … ။
ကျွန်မတို့ ဘိုးဘွားတွေလက်ထက် ဘီယာဆိုတာမျိုး ပေါ်ချင်မှ ပေါ်ခဲ့မယ် … ဒါပေမဲ့…. တောအရက်တွေကိုတော့ ဆေးဝါးအဖြစ် သောက်သုံးခဲ့တာတွေ … ဒဏ်ကြေဆေးအဖြစ် လိမ့်ကျံခဲ့တာတွေရှိခဲ့ပါတယ် … ။ အဲ့ဒီလူတွေကိုရော … အကျင့်စာရိတ္တပျက်ပြားတဲ့ မိန်းမပျက်စာရင်းထဲ ရောပြွမ်းပြီး ထည့်လိုက်တော့မှာလား … .။ နှိုင်းယှဉ်ပြရလျှင် ဖြင့် ကုန်နိုင်မယ်မထင်ပါဘူး … ။ ၂၁ ရာစုရဲ့ အမျိုးသမီးတချို့ကတော့ ယခင်ကလူတွေနဲ့ မတူပဲ ရဲတင်းပွင့်လင်းလာကြသော်လည်း လက်လှုပ်လက် ၊ ခြေလှုပ်ခြေ လိုက်ပြောနေမယ့် ရှေးအယူစွဲ လူများကလည်း ကျန်သေးတာမို့ …. ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်း … မိဘဆွေမျိုး အသိုင်းဝိုင်းရဲ့ မျက်နှာတော့ ပြန်ထောက်ကြရမှာပေါ့ … ။ လှုံ့ဆော်မှူ အမျိုးမျိုး ၊ အကြောင်းပြချက် အမျိုးမျိုးကြောင့် အရက် ၊ ဘီယာ ၊ ၀ီစကီ ၊ ၀ိုင်ကို နှစ်ခြိုက်စွာ သောကသုံးကြတဲ့ အမျိုးသမီးတွေလည်း ရှိပါတယ် … မိမိရဲ့ အပြုမူက သူတပါးကို ဒုက္ခမပေးဘူး ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ရိုင်းပြစော်ကားနေတာ မဟုတ်ဘူးဆိုလျှင် တူညီတဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်ရှိသင့်တယ်မဟုတ်လား ။မှိုတတ်နေတဲ့ အယူအဆတွေ လက်ခံကျင့်သုံးမယ်ဆိုလျှင် … ကျွန်မတုိ့ရဲ့ next generation တိုင်အောင် ဖျောက်မရတဲ့ အယူဆတွေ ပါသွားလိမ့်မယ် … ။ အကျင့်စာရိတ္တ ကောင်းတယ် ၊ ဆိုးတယ်ဆိုတာ ပင်ကိုယ်စရိုက် ၊ စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ပဲ သက်ဆိုင်ပါတယ် ….. ၄င်းတို့ရဲ့ အစားသောက် အမျိုးစားပေါ် သက်ရောက်မှု မရှိတာ … သူများမျက်ချေးပဲ မြင်ပြီး ကိုယ့်မျက်ချေးကိုယ်မမြင်တဲ့ လူတွေ သဘောပေါက် နားလည်ဖို့သင့်ပြီလေ … ။
ကျွန်မဒီပို့စ်ရေးတာ မိန်းမတွေ ဘီယာ၊ အရက်၊ ၀ိုင် ၊ ၀ီစကီတွေ သောက်ကြပါစေတော့လို့ …. ရည်ရွယ် တိုက်တွန်းတာမျိုးမဟုတ်ပဲ ….. ၀ါးလုံးရှည်နဲ့ သိမ်းကြုံးရမ်းချင်နေကြတဲ့ …. ဆီလို အပေါက်ရှာ ပြောချင်ကြသူတွေအတွက် လက်ခံနားလည်လာအောင်ရေးခဲ့တာပါ … ။ မိန်းမတွေကလည်း … ကိုယ်ကြိုက်လို့ ကိုယ်သောက်တယ်ဆိုပေမဲ့ …လူအများအလယ်မှာ အရှက်တကွဲ အကျိုးနည်းဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အမှားယွင်းမျိုးရှောင်သင့်ပါတယ် …. ။ ကိုယ့် limit ကိုယ်သိပြီး သောက်လျှင် ဘယ်သူကမှ ကိုယ်ထိလက်ရောက်မပြောနဲ့ …. နှုတ်အမူယာနဲ့ပါ မစော်ကားရဲပါဘူး …. ။ အသွေးပဲ ရရ ၊ အသားပဲ ရရ အမဲဖြတ်ချင်တဲ့ တချို့ ယောကျာ်းတွေကြားထဲ မူးမူးကွဲကွဲဖြစ်လို့ကတော့ …. မိမိထိုက်နဲ့ …. မိမိကံပဲ မို့ … အတတ်စူးလို့ မရူးကြပါစေနဲ့လို့ပဲ … တိုက်တွန်းလိုက်ချင်ပါတော့တယ် ..။
ကြိုက်တာရွေး ... ကျသလောက်ရှင်း
အင်းပါ အင်းပါ ဘီယာမမရယ်.. ခုလို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဝေဖန်ပြတဲ့အတွက်လည်း ကျွန်တော်က ကျွန်တော် အရက်စက်ရုံဝန်ထမ်း ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကနေ အရက်ပြုလုပ်ပုံ၊ ဘာတွေပါဝင်တယ်၊ ဘယ်သူတွေသောက်ကြတယ်၊ ဘာတွေဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာ ထပ်မံရေးသားဦးမယ့်အကြောင်း :D
အံမယ် .. ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ရေးချင်လျှင် ရေးချင်တယ်ပေါ့ .. ဟဲဟဲ .. မဝေဖန်လည်း ရေးမှာကိုးများ ..
အကောင်းနဲ့ အဆိုး ဒွန်တွဲတော့ပြဖို့ လိုတယ်နော် … ဆိုးတာချည်းထည့်ရေးလျှင်တော့ … တဖက်သတ်ရေးတယ် ဖြစ်ဦးမယ်
ခေါင်းစဉ်ကို ခြုံပြောရရင် သေရည်ဆိုပါတော့။ အဲဒီ ထဲကတမျိုးမျိုးကို မတောက်တခေါက်သောက်ပီး မူးချင်ယောင်ဆောင်တဲ့မိန်းမတွေ၊ အရှိန်လွန်နေမှန်းမသိ (မမြင်ဘူးမူးမြစ်ထင် ဆိုသလို) စွတ်သောက်ပီး တကယ်မူးသွားတဲ့ မိန်းမတွေကိုတော့ စိတ်ပျက်မိတယ်ဗျာ။ လူမြင်လို့မကောင်းတာအမှန်ဘဲ။ ဘီယာ (သို့) ၀ိုင် တနေ့တခွက်ပုံမှန်သောက်ရင် ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးရှိတယ် ဆိုတာမျိုးနဲ့ သောက်ရင်တော့ မပြောလိုပါ။ နောက်ပီး လူမှုရေးအရ ပွဲတက်ရင်း ၁ခွက် ၂ခွက်လောက်ဆွဲလိုက် တာလဲပြသနာမဟုတ်ပါ။ ;)
တုံရေ မည်းတိုင်း ကျီးကန်း မဟုတ်ပေမဲ့ ကျီးကန်းတိုင်းကတာ့ မည်းတယ်လေ။ အဲ့လိုပဲ အရက်၊ဘီယာသောက်တိုင်း မိန်းမဆိုး မဟုတ်ပေမဲ့ မိန်းမဆိုးတိုင်းကတော့ သောက်ကြတာကိုး။ ဘုရားဟောမှာကိုက မူးယစ်စေတတ်သော အရာမှန်သမျှကို တားမြစ်ထားတော့ ဘာသောက်သောက် ပါဏာတိပါတာကံက ထိုက်ပြီလေ ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံမို့ မိန်းခလေးမပြောနဲ့ ယောက်ကျားလေးတွေ သောက်ရင်တောင် အပြစ်လို့ မြင်ကြတာဆိုတော့ တင်တဲ့သူလည်း တင်မှာပဲ ကြိုက်တဲ့သူလည်း သောက်မှာပါပဲ။
Eeeeeeee…. မမှီ … ဘီယာ၊ ၀ီစကီ ၊၀ိုင်ပဲသောက်တာ … ဘာလို့ … ပါဏာတိပါတာကံက ကျူးလွန်မိလျှက်သားဖြစ်သွားတာလဲ … အမြည်းကြောင့်များလား ..
ဟီး.. ရေးချင်ဇောရယ် သားနဲ့လုနေရတာရယ်ကြောင့် သုရာမေရယ ရေးပါတယ် ဘယ့်နှယ့်ကြောင့် ပါဏာတိပါတာ ရေးမိပါလိမ့်။
ဒို့က ဆေးခန်းမှာဆိုရင် ကိုရင်တွေ လာကုတဲ့အခါ အမြဲ စ တယ်
ကိုယ်တော် မှန်မှန်ပြောနော် လိမ်ပြောရင် ပါဏာတိပါတ ကံ ကျူးလွန်ရာ ကျတယ် လို့ ပြောတတ်တယ်
လည်ပတ်တဲ့ ကိုရင်တွေကတော့ .. မှားတယ် .. မုသာဝါဒ ပါ လို့ ပြန်ဖြေတတ်ပေမယ့်
၀အို့ဝ် “၀” တွေ ဆိုရင် ဘာမှ ပြန်မပြောတတ်ဘူး
ယောက်ျားလေးများကတော့ ၀ီစကီတနေ့ ၂ပတ်ယောက်သုံးသင့်တယ်လို့ကြားဖူးပါတယ်။
ကျမလဲ ဘီယာတို့ဝိုင်တို့ဆို တော်တော်ကြိုက်ပါတယ်
ဒါပေမယ့် အမျိုးသားပြန်လာတဲ့အချိန် အပေါင်းအသင်းတွေဆုံကြတဲ့အချိန်မျိုးမှာတော့
သူမရှိတဲ့အချိန် အရမ်းသောက်ချင်နေတာတောင် မသင့်တော်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့
ဒါကြောင့် ဒါတွေသောက်တဲ့မိန်းမတိုင်း အကျင့်ပျက်နေတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး
ဟုတ်ကဲ့.. ကျွန်တော်ကလဲ နှစ်ပိုင်းခွဲပြီး မြင်မိပါတယ်၊ တစ်ပိုင်းက အရက်၊ တစ်ပိုင်းက ဘီယာဆိုပြီးတော့ခင်ဗျ
စုံစုံရေ ….. ဘီယာသောက်တာနဲ့ အသိစိတ်ကင်းမဲ့သွားတာ … တကယ့်ကို တခြားစီပါပဲ ဆိုတာမျိုး လူကြီးတွေကို ပြောပြချင်တာ …။ Generation Gap ဖြစ်နေတော့ … ကိုယ်တွေ ဘာလုပ်လုပ် အကောင်းမမြင်ဘူးလေ ….။ တစ်ခါတစ်ရံ ပါတီတွေ ၊ပွဲတွေမှာ နည်းနည်းသောက်ဖြစ်ပေမဲ့ …အိမ်မှာနေတဲ့အခါ … ခေါင်းအေးအေးနဲ့ …တစ်ယောက်တည်းနေလျှင် သောက်ချင်တဲ့ အခါ သောက်လို့ရအောင် ရေခဲသေတ္တာထဲ ၀ယ်ဝယ်ထည့်ထားတတ်တယ် … ။ အဲ့ဒါကို ရေခဲသေတ္တထဲ ကြွက်ဝင်သေတယ်မှတ်သလားမသိ … တကြွတ်ကြွတ်လာလာပွားကြတယ် … ။ နားလည်အောင်လည်း ပြောပြတယ် … အိမ်မှာ အေးဆေးဘီယာသောက်တာ အမြဲလည်း မဟုတ် .. တစ်ခါတစ်လေ … ၊ သူများပစ္စည်းခိုးစားတလည်းမဟုတ် … ၊ အော်ဟစ်ရန်ဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ် ဘာလို့များ လက်မခံကြလည်း မသိဘူး .. ။ ဒီတော့နားညီးညီးနဲ့ … (အရင်က) ကန်ဘောင်မှာ သွားထိုင်သောက်တယ် … ။ မိန်းကလေးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ ပါ … အလုပ်ထဲကပြသနာ ၊မိသားစုပြသနာတွေပြောရင်း လေအေးအေးမှာ ထိုင်သောက်ရတာ တကယ့်ကို အနှစ်သာရရှိလွန်းပါတယ် … ဒါတောင် ဖြတ်သွားတဲ့ ငနဲတွေက ပြူးတူးပြဲတဲ လာကြည့်သေးတယ် … ။ စိတ်မထင်ရင် ဘီယာဘူးခွံနဲ့ ပေါက်တတ်တယ်ဆိုတာ သူတို့ မသိသေးလို့ …
နောက်ပိုင်းတော့ သိပ်မသောက်ဖြစ်တော့ဘူးလေ … အသက်နည်းနည်းကြီးတာနဲ့ … ၀ိတ်လည်း တက်လာတယ် … ဗိုက်လည်း ပူလာမှာ စိုးလို့ …
မူးရူးနေရင် ကျားကျား၊ မမ ကြည့်မကောင်းပေမယ့် မိန်းကလေးအနေနဲ့ ပိုဣနြေ္ဒပျက်စေလို့ထင်ပါရဲ့
ပြီးတော့ မetoneပြောသလို အမဲဖြတ်ချင်တဲ့ ကျားတွေနဲ့တွေ့ရင် ဒုက္ခရောက်မှာလေ
Most often the women complain about their facial beauty and their weight that is increasing rapidly. An ill shaped body loses the charm whileaface full of wrinkles and sagging skin completely destroys the beauty that you have. The ladies who are in their thirties commonly ask for the remedies that are anti aging and help them in preventing the early aging symptoms. A fair and problem free face is what we all need and wish to have.
Red wine isagreat antioxidant that prevents aging and works as an anti aging solution. You can check out the early aging symptoms using the moderate quantity of red wine. It contains beneficial elements and various types of antioxidant that purify your skin and maintain the natural glow that it has. This wine is used in preparing beauty products, anti aging creams and various other beauty services as well.
The red wine can shed your extra kilos and can save you from the fatal diseases like- cancer, heart disease, diabetes, liver and cardiovascular problems. It isafast fat loss remedy. The chemicals that are present in the red wine detoxify you body and energize you. It ensuresabetter blood circulation, controls the cholesterol level and guards you against the Alzheimer’s and Parkinson’s diseases. It fights with obesity problem and gives youaclear skin as well.
The facial beauty and the perfect body goes hand in hand, one without the other is incomplete. Thus, the overall looks depend on these factors. Your thrust for searching and applying newer things sometimes affect your body badly. So rely on the natural substances that are very much useful for complete body care comprising of the health as well as the skin care.
Wine is one of the hardest stains to remove, and quite often it is wine that’s been spilled. Read more about how to remove red wine stain and about red wine stain removal.
Article Source: http://EzineArticles.com/?expert=Jack_Turner
အာ… မိုက်တယ်ကွ …သဂျီးပြောတာတွေ့လား … ၀ိုင်သောက်ရမယ်… အနီလေး အနီလေး stain ကိုလည်း removal အဖြစ် သုံးလို့ရသေးတယ်ဆိုပဲ … ။ စမ်းကြည့်ဦးမှ
ဘီယာက.. အရက်ပါပဲ..။ အထဲမှာ alcoholရာခိုင်နှုန်းတချို့ပါတယ်ရေးထားတယ်..။
၀ိုင်ကလည်း alcohol ပါတာမို့.. အရက်ပါပဲ..။
ဘီယာက..အဆီများပြီး.. ၀စေတာမို့.. မိန်းကလေးတချို့နဲ့ မကိုက်ပါဘူး..။
၀ိုင်ကတော.. ဥရောပ..အထူးသဖြင့် ပြင်သစ်.အီတလီမှာ.. တနိုင်ငံလုံးလိုလို.. သောက်နေကြတာပါ..။
ကင်ဆာကာကွယ်တယ်..။ ကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်..။ အထူးသဖြင့် အသားအရေလှတယ်ဆိုကြတယ်..။
မိန်းမတွေ ၀ိုင်သောက်တော့.. သဗြစ်ခြံအလုပ်လုပ်သူတွေ.. အလုပ်ရတာပေါ့ကွယ်..။ မီလီယံဘစ်ဇနက်တခုအသစ်ထွက်လာမှာပေါ့..
တကယ်တော့..ဖွံ့ ဖြိုးပြီးတိုင်းပြည်က.. လူတွေ..
၀ိုင် နီနီလေး ဆိုလို့ ရုပ်ရှင်ကား တစ်ကားမှာ စပျစ်ဝိုင် ထုတ်တဲ့ မိသားစု ဇာတ်လမ်းလေးမှာ စပျစ်သီးတွေကို ကန်ထဲ ထည့်ပြီး လူတွေ ၀င် ၀ိုင်းပြီး နင်းကြတယ် လေ
ခြေထောက်တွေများ ပေကျံနေရင် .. ဟိုဟာတွေ နင်းထားတဲ့ ခြေထောက်များ ပါလာရင် ဆိုပြီး
ဟိုးတလောက အင်တာနက်ထဲမှာ ၀ိုင်ကြော်ငြာတစ်ခုတွေ့တယ် … စပျစ်သီးပုံးကြီးထဲမှာ မိန်းမတစ်ယောက်ဝင်ထိုင်ပြီး စပျစ်သီးတွေကို လက်နဲ့ ညှစ်ပြတဲ့ပုံလေ.. သူ့ခေါင်းမှာလည်း စပျစ်နွယ်လိုမျိုးတွေပန်ထားတယ် … စပျစ်သီးဖတ်တွေနဲ့ တကိုယ်လုံး ပေနေတာပေါ့… ။
မုန်းစရာကောင်းတာက အ၀တ်ဝတ်မထားတာပါပဲ အဲ့ဒါမြင်ပြီး အန်ချင်မိတယ် ။
Normally, I don’t drink any type of alcohol
( coz I don’t like the taste of bitterness ).
But, because of သဂျီး encouragement & recommendation,
from now on, I will try “Red Wine”.
ကိုဖောရိမ်းတို့ဘက်က ထွက်တဲ့ အော်စတေးလျန်း ရှီရာဇ် က ဒီဘက်မှာ လာပြီးတော့ အရမ်းကိုနာမည်ကြီးနေတာ ပေါင်နှစ်ဆယ် လောက်ရှိတယ် အဲဒီမှာပိုပေါမှာ ပေါ့ ချသာချ….
ရီယိုကာ၊ကီယန်တီ၊အာဖရိကန် မဲလော့၊ချီလီ ကားဘနက် တို့နဲ့ဈေးတန်းတူ လိုက်နေတာ..
မလိုအပ်ဘဲ မလုပ်သင့်တာတွေလဲ ရှိနေတော့
သြော်……………………..လောက လောက လောက
အလွန်အကျွံ ကြီး အိနြေ္ဒမပျက်ဘူး လူကြီးလူကောင်းဆန်ဆန်သောက်ရင်တော့ ကြည့်ကောင်းမှာပါ။
မြန်မာကားတွေထဲ က အရက်သမားတွေလို ဟိုအော်ဒီအော်ရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့။
ဘီယာတော့ကျုပ်မသိဘူးဗျို့ ၊ဒါပေမယ့် စက်မှု -၂ ရမ်လေးတော့ကောင်းသဗျို့။ဘေးမှာ အရက်ငှဲ့ပေးမယ့်အဖော်ကောင်မဘေးငယငယ်တစ်ယောက်ကလိုသား။ဟား ဟား နှာဘူးလို့အပြောခံနိုင်တယ် ဂမ်ဒူးတော့အပြောမခံနိုင်ဘူး။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အင်နာနေရှင်နယ် စင်္ကြာဠာကိုတက်လှမ်းဆဲ
စည်းကမ်း ကလနား မရှိတဲ့ဇဂါးဒွေဂို မပြောရဘူးဆိုဒါ
အဲဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ရင် အဘပုက လုံးဝ သည်းမခံဘူးနော်။ ရွာထဲမှာ နောက်ကြောင်းတွေ ပြန်လိုက်ကြည့်လိုက်ဦး။ :D
တကယ်မသိလို့မေးကြည့်တာပါ။ ” ……….. အိုး ………၇ှိတာပေါ့ thit min ရယ် လိုက်ရှာရင် အလွယ်လေးတွေ့နိုင်ပါတယ် ။ မသောက်တက်ရင် အမျိုးတွေနဲ့ ဖြစ်ပါမလားဆိုပြီးတောင် ပြောတဲ့ မိသားစုတွေတောင်ရှိတယ် တကယ်အဟုတ်နော် ………….
ရှိတာပေါ့ .. သိပ်ကို ရှိတာပေါ့ …။
ဘီယာ၊ အရက် ၊၀ိုင်သောက်တိုင်း မိန်းမပျက်မှ မဟုတ်တာ.. တစ်ခါတစ်လေ … ပွဲလန်းသဘင်တွေမျာ လူဝင်ဆံ့အောင် သောက်ကြရတယ် … သို့သော် .. တခါသောက်ပြီး သြဥတော့မဆွဲနဲ့ပေါ့နော် … သရုပ်ပျက်အောင်လည်း မသောက်ဘူး … ဒါဆိုအိုကေပေါ့..
ယောကျာ်းလေးဖြစ်ဖြစ်၊ မိန်းကလေး ဖြစ်ဖြစ်… အရက်၊ဘီယာ သောက်တာ အပြစ်မြင်စရာမရှိပါဘူး… တန်ဆေးလွန်ဘေးစကားကို သတိရ… သတိနဲ့ အသိလေး ကပ်ထားရင် အကောင်းဆုံးပါ… မူးလွန်းလို့ ချီးစားတဲ့သူ ကျနော် သက်တမ်းမှာ မတွေ့ဖူးသေးပါဘူး….။ xD ကိုယ်တိုင် စိတ်ဖောက်ချင်တိုင်း အရက်၊ ဘီယာ သောက်ထားတယ်ဆိုတဲ့ ခုတုံးလုပ်ကြတာ မကောင်းပါဘူး… ချီးယားစ်…. (ရွာသူ/သား ခွက်ရိုက်လိုက်သံ) စော်ကြည်၊ ထီပေါက်၊ နိဗာန်ရောက်၊ အလုပ်မလုပ်ပဲ ပိုက်ဆံများများရကြပါစေ… (သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဘီယာသောက်တိုင်း ဆုတောင်းနေကြ စကားသံလေးပါ။ ).. :D
““အရက်သမားတွေများ ဆင်ခြေပေးကောင်းလိုက်တာ….ဒါတောင်ရေချိန်မမှန်သေးလို့”” ဆိုတဲ့
တစ်ချိန်တုန်းက ဆေးဖြစ်ဝါးဖြစ်ကနေစပြီးတော့ အရက်သမားလုံးလုံးဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ကျနော့်ဘ၀ကို
အရက်သမားဘ၀ကိုလွတ်မြောက်သွားတာလောက် ကျနော့်ဘ၀မှာ ဂုဏ်ယူဝမ်းသာစရာမရှိတော့ပါဘူး။
ဘီယာသောက်တဲ့ သူတိုင်းက ဘီယာဟာအရက် မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောလေ့ရှိကြပါတယ်။ ကိုယ့် သူငယ်ချင်း တိုင်းရင်းသူ တွေ ခေါင်ရည်သောက်ကြတယ်။ ရိုးရာပွဲမှာ သောက်နေကျ။ ကိုယ့် အမေ ကလေးမွေးတိုင်း အာမီရမ် ဆိုလား ဟိုး ခေတ်ကခေါ်တာလေ၊ မီးတွင်းတစ်ခါ တစ်ပုလင်းပဲ။
သို့သော် မြန်မာ ဆယ်ကျော်သက် မိန်းကလေး တွေ သင်္ကြန် မဏ္ဍပ် ပေါ်မှာ စုတ်ပြတ်နေအောင်
ဆရာမ မန်းသလို ပါပဲ
ဆရာသော်တာဆွေ ရဲ့ 
ဘရန်ဒီ တစ်ပုလင်း ၀တ္ထု ထဲ မှာ ပါပါတယ်
မီးဖွားဖို့ ဘရန်ဒီ ပုလင်း ဆောင်ထားပေးတယ် ဆိုတာ
မိကောင်းဖခင် သမီး မဟုတ်ရွေ့ သော်လည်းကောင်း
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဖြစ်ရွေ့ သော်လည်းကောင်း
မဏ္ဍပ်ပေါ်ရှိ စားကျားများ က ဂွင်ဖန် ရွေ့ တိုက်လို့ သော်လည်းကောင်း
အမျိုးသား သူငယ်ချင်းမှ ဂွင်ဖန်ရွေ့ မသိမသာ အရက်များများ ရောတိုက်လို့ သော် လည်းကောင်း
မည်သည့် အမျိုးကောင်းသမီး မှ
ပညာတတ် အမျိုးသမီး မှ
လူမှန်းသူမှန်း မသိအောင် မသောက်ကြပါ ခင်ဗျာ
ဒီနေရာ မှာ….ဘာလို့ သောက်လဲ
သောက်တာနဲ့ မှားတာပဲ လို့ ပြောလာရင်…မေးလာရင်
အိမ်တွင်းက အိမ်ပြင် ကို ထွက်တာ နဲ့ မှားနေပြီ လို့ ပဲ
အဖြေပေးစရာ ရှိပါတယ် ( ရိပ်သာ သွားတာကတော့ တစ်ကြောင်းပေါ့ )
ကိုယ့်စိတ်ကို နိုင်အောင် ထိန်းကြရတာပါပဲ
အရက်သောက်တဲ့ နေရာ မှ မဟုတ်ပါဘူး
အရက်သေစာကို.. .ယောင်္ကျားရယ်မိန်းမရယ် ခွဲပြောနေလို့ ရမယ်မထင်ပါဘူး… မသောက်သင့်တာတော့ နှစ်မျိုးနှစ်စားလုံးမသောက်သင့်ဘူးထင်တာပါပဲ… alcohol ကိုယ်ထဲရောက်တာနဲ့အနဲအများလိုက်ပြီး ကိုယ်ကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းလဲ လျှော့လာမှာပါ… ပြောတာ.ဆိုတာ..ဆုံးဖြတ်တာအကုန်.. သာမန်အချိန်ထက်တော့ ရဲတင်းနေမှာပါပဲ… ယောင်္ကျားပဲသောက်သောက် မိန်းမပဲသောက်သောက်… မသောက်သင့်တဲ့အချိန် မသောက်သင့်တဲ့နေရာတွေမှာသောက်ရင်တော့ လူမှုရေးပြသနာတွေကတော့.. သေချာပေါက် ဖြစ်လာမှာပါ… ဒီထဲမှာမှ မိန်းကလေးတွေ ကိုပိုပြောချင်ကြတာကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုစီးကြောင်းကြီးအရဖြစ်ပါလိ့မ်မယ်… အရက်သမားတစ်ယောက် လမ်းဘေးလဲနေလဲကျွန်တော်တို့ ကြည့်ပြီးဖြတ်သွားရုံပါပဲ… အဲဒိနေရာမိန်းမတစ်ယောက်သာဆို… တော်တော်ထူးခြားနေမယ်ထင်ပါတယ်… ကျွန်တော်ကတော့ မဟာယောင်္ကျားဝါဒဖြစ်နေမလားတော့မသိဘူး… မသောက်တာချင်းတူရင်တောင်မိန်းမတွေကပိုမသောက်သင့်ဘူးထင်ပါတယ်… ဘာလို့ ဆို မိန်းမတွေက ယောင်္ကျားတွေလောက်တော့.. ထိခိုက်ရှနာမခံနိုင်ပါဘူး.. ပြီးတော့ အမြတ်ထုပ်စရာတွေဆိုရင်လဲ.. ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ထက်မိန်းမတစ်ယောက်ကို အမြတ်ထုပ်စရာတွေပိုများနေတယ်ထင်ပါတယ်… ဒါကြောင့် ကျန်းမာရေးအကြောင်းပြပဲသောက်သောက်… limit ထိန်းနိုင်လို့ သောက်တယ်ပဲပြောပြော… သောက်ရင်တော့မူးမှာပါပဲ… မူးရင်တော့ အနဲနဲ့အများတော့ loose ဖြစ်မှာပါပဲ….
Sorry to say , most of us ,myanmar nationality , including men and women , have lack of self control . That is the major problem.
If you do not drink , it is better but if you drink , know when to stop and how to behave , then , there will be no problem. But most of us don’t.
၀င်ရောက်ဆွေးနွေးတဲ့ လူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် …. အရက်မှ မဟုတ်ပါဘူး.. ဘယ်အရာမဆို လွန်လွန် ကြူးကြူး မဖြစ်သင့်ပါဘူး … တန်ဆေး လွန်ဘေးဆိုတဲ့ စကားလေးကို သတိရမိတယ် ..
တမျိုးစဉ်းစားကြည့်မယ်။ နာမ်ဝိညာဉ်ရေးရာ ဘာသာတိုင်းက အရက်သေစာ သောက်စားမူးယစ်တာ အပြစ်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ မူလအသိစိတ်မှ ပြောင်းလဲချွတ်ချော်စေလို့ပါ။ မသောက်မစားဘဲ နေတာတောင် အကုသိုလ်စိတ်တွေများနေရင် မူးတဲ့အခါ ပိုဆိုးမလား ပိုကောင်းမလား တွေးကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဘာသာတရား အဆုံးအမဖက်က အမြင်ကိုပြောတာပါ။ ခြွင်းချက် မထားပေးပါဘူး။
ဘာသာတရား အဆုံးအမ မပါရင်တော့ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် မမူးရင် အပြစ်လို့ မြင်ဖို့ခက်ပါမယ်။ အရက်ဆိုတာ စွဲတတ်တယ်၊ မူးရင် မှားတတ်တယ်ဆိုတာ သိထားရမယ်။ စိတ်ထွက်ပေါက်တခုအနေနဲ့ မူးယစ်ဆေးလိုပဲ မသုံးသင့်ဘူး။ ရဲဆေးတင်တယ်ဆိုတာ မဟုတ်တာလုပ်တဲ့လူများ၊ ဖိအားပေးခံရသူများ လုပ်ရတာမျိုးပါ။ အရက်မူးပြီး အလှူခံ၊ ကာရာအိုကေ၊ ဘားတွေမှာ ကလပ်မယ်တွေ မူးတယ်ဆိုတာ ဒီသဘောပါပဲ၊ သိမ်ငယ်စိတ် မဝံ့မရဲ အားငယ်ရှက်ရွံ့ စိတ်တွေကို အရက်နဲ့ ဖျောက်ပြစ်ပါတယ်။ ဒါမှလဲ လုပ်စားလို့ ရမှာပေါ့။
တားမရ မိန်းခလေးများ သောက်ရင်လည်း အဆင့်အတန်းရှိရှိ သောက်စေချင်ပါတယ်။ အဆင့်အတန်း ရှိရှိဆိုတာ မမူးတာကို ပြောတာပါ။ အသိစိတ်မပျောက်တောင် မူးတာကို ထိန်းနေရရင်၊ ထိန်းနေရမှန်း သိရင် မိန်းခလေး မပြောနဲ့ ယောက်ျားလေးတောင် သတိအပြု ခံရပါတယ်။ ကျနော်တို့တတွေ အဝတ်အစား ကောင်းကောင်းမွန်မွန် သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဝတ်၊ ဆံပင်ညှပ်အလှပြင်တာ ဘာကြောင့်လည်း၊ စုတ်စုတ်ပြတ်ပြတ် ဖြစ်ကတတ်ဆန်းလူတွေနဲ့ တန်းမညှိချင်လို့ မဟုတ်လား။ ဒီသဘောပါပဲ ကိုယ့်ကို ကြေးစားအဖြစ် တန်းတူအထား မခံချင်ရင် မမူးပါနဲ့၊ အဆင့်အတန်း ရှိပါစေ။
ကိုကြောင်ကြီး ပြောသမျှအထဲမှာ အခု ပြောတာကို အကြိုက်ဆုံးပဲ။
ကိုကြောင်ကြီးပြောတာကောင်းပါတယ်။ လူဆိုတာ ကိုယ်သမိုင်းကိုယ်ရေးရတာပါ။ ကောင်းမွေ ဆိုးမွေ ဆိုတာ ကိုယ်ပဲခံရမှာပါ။ ကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကိုယ် မှန်တယ်ထင်ရင်လုပ်ကြပါ။ ကျနော့်အမြင်ကတော့ အရက်ဆိုတာ မ စ တာကောင်းပါတယ်။ အရက်ဆိုတာစသောက်ပြီဆိုတာနဲ့ စွဲတတ်ပါတယ်။ အရက်သောက်ရင် ဘာ အကျိုးကျေးဇူး ရှိမလဲ။ ကျနော့်အမြင် ဆိုးကျိုးများမယ်ထင်ပါတယ်။ အရက်သောက်ရင် ငွေကုန်မယ်။ မူးလို့အပြောအဆို မှားရင် ပတ်ဝန်းကျင်လည်း အနှောက်အယှက် ဖြစ်မယ်။ မိသားစုအတွင်းမှာလည်း စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေဖြစ် နိုင်တယ်။ အရက်သောက်တဲ့သူ အများစု အတိုင်းအထွာနဲ့သောက်နိုင်တဲ့သူရှားမယ်ထင်ပါတယ်။ စသောက်တဲ့သူတိုင်းဟာ စမ်းကြည့်မယ် အတိုင်းအထွာနဲ့ သောက်မယ်ဆိုပြီးစခဲ့တဲ့သူတွေများပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲကိုယ်စိတ်ကိုယ်မနိုင်ပဲ စွဲသွားတဲ့သူတွေအများကြီးပါ။ ဘောပဲလုပ်လုပ် ကောင်ကျိုး ဆိုးကျိုး ကို ချင့်ချိန်လုပ်နိုင်ရင် ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။
သောက်တိုင်း လူဆိုးမဟုတ် ကျားမ မခွဲခြားပါဘူး။
ဟိုတစ်ယောက်ပြောသလို မိန်မဆိုးတိုင်းသောက်တာပဲဆိုတော့ မသောက်ပဲဆိုးယုတ်တဲ့ မိန်းမတွေမတွေ့ဘူးလို့ထင်ပါရဲ့။ ပါးစပ်က တရားအပြောလေးနဲ့ စိတ်ထဲက ဆိုးယုတ်နေတာတွေ များလွန်းလို့။
သောက်တဲ.မိန်းကလေးတိုင်းလည်း မကောင်းတဲ.သူ မဟုတ်သလို
မသောက်တဲ.မိန်းကလေးတိုင်း ကောင်းတဲ.သူတွေမဟုတ်ပါဘူး မမတုံ ပြောသလိုပဲ
ကျနော်တွေ.ဖူးတဲ. အန်တီ တစ်ယောက်ဆိုရင် တော်တော်အနေထိုင်ရိုးတယ် နေ.လည်ဘက်
နံနက်ဘက်ဆို ဘုရားတရားနဲ.နေတယ် အသက်ကတော. 39 လောက်ပဲရှိအုံးမယ်
ညဘက်ကျတော. ယောက်ျားအပြင်ထွက်သောက်ရင် ရန်တွေဘာတွေများမှာစိုးလို. အိမ်မှာပဲဝယ်ပြီး
သူပါအဖော်လုပ် သောက်ပေးတယ် အဲလိုကျတော.လည်း ကောင်းပြန်ရော
အဆိုးနဲ.အကောင်းတော. ဒွန်.တွဲနေတာပါပဲဗျာ သုံးဆောင်တဲ.သူပေါ်မူတည်ပါတယ် လို.ထင်တယ်
ဘီယာဟာ အရက်တော့ မဟုတ်ပါ ၊တငွေ့ ငွေ့လေးနဲ့ အတော်လာတာ။
( comment မပေးဘူးတာကြာပါပြီ။ ဒီပိုစ်တွေ့တော့ ထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့ comment ပေးတာပါ)
မိန်းကလေးတွေ ဘီယာသောက်ရင် လူအမြင်မတော် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖြစ်သင့်တာက . . .
အရွယ်ရောက်စကတည်းက ဘီယာကိုနည်းနည်းစီ မိသားစုနဲ့ စတင်သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။
ဒါမှ . . .
၂။ဘီယာသောက်တိုင်း မမူးနိုင်။ အိနြေမပျက်နို်င်ဆိုတာလည်း သိလာမယ်။
၃။အခြားဘီယာသောက်နေတဲ့ မိန်းကလေးကိုတွေ့ရင်လည်း အထင်မသေးတော့ဘဲ ကိုယ်ချင်းစာတတ်လာမယ်။
၄။ လိုအပ်လို့ ဧည့်ခံပွဲတွေမှာသောက်လို့လည်း အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။
၅။ သင်္ကြန်လို ကာလမျိုးမှာ သတိနဲ့သောက်ခြင်း၊ မသောက်ဘဲနေခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ (သောက်လေ့သောက်ထမရှိတဲ့သူများ သောက်မိရင် သူများထက်ပိုကဲမှာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။)
၆။ယောက်ျားလေးများက ညာတာပါတေးနှင့် ဘီယာတိုက်၊ အရက်တိုက်ကာ သွေးဆောင်ဖျားယောင်းခံရခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မြန်မာအမျိုးသမီးများ အနည်းနဲ့အများ ဘီယာကို သောက်သင့်ကြောင်း(သောက်ကျင့်ရှိရန်လိုကြောင်း) တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
မထိန်းနိုင်တဲ့သူ ၂ မျိုးကွဲပါတယ်
ယောက်ျားမယူခင်အထိတော့ ၀ိုင်ဆိုတာဘာလဲ ဘီယာဆိုတာဘာလဲ ဘာဆိုဘာမှ မသိခဲ့ဘူး။ မသိဘူးဆိုတာ မကြုံခဲ့လို့မဟုတ်ဘူး။ မစမ်းသပ်ခဲ့တာ။ လုံးဝရှောင်ကြဉ်ခဲ့တာဆို ပိုမှန်မယ်။ ပြီးတော့ အဖေ အစ်ကို မောင်တွေကလည်း ကိုယ့်ရှေ့မှာ ဆင်ခြင်တယ်လေ။
အိမ်ထောင်ကျတော့ လိုက်လျောညီထွေလုပ်ရပြီပေါ့။ ချစ်ခင်ပွန်းက ၀ိုင်ကောင်းထွက်တဲ့အရပ်ဒေသကသူမို့ ၀ိုင်ကိုသိပ်ကြိုက်တယ်။ တစ်ပတ်ကို တစ်ခါ/နှစ်ခါတော့ ရုံးပိတ်ရက်မှာ ပုံမှန်သောက်တယ်။ တစ်ခါသောက်ရင်လည်း သူတစ်ယောက်တည်း ၂/၃ပုလင်းလောက်ကုန်တယ်။ ယူကာစက ကိုယ်မသောက်တတ်မှန်းသိပေမဲ့ သူ့ဆွေမျိုးတွေဆီသွားလည်လို့ ကိုယ့်ကို အလေးထားပြီးငှဲ့ပေးတဲ့ဝိုင်ခွက်ကို ယူသောက်ဖို့ငြင်းဆန်ရင်၊ သောက်မပြရင် မယဉ်ကျေးရာကျတာမို့ ၀ိုင်ကိုသောက်တတ်တဲ့အကျင့်လုပ်ပေးခဲ့တယ်။ ၀ိုင်နီက ကျန်းမာရေးကိုလည်း အထောက်အကူပြုတယ်ဆိုပြီး.. အဲဒီကစ ၀ိုင်သောက်တတ်လာခဲ့တယ်။ ၀ိုင်ဖြူ ၀ိုင်နီ ရှန်ပန် dessert-wine…။ ၀ိုင်သောက်တတ်လာတာ အခုဆို နှစ်အတော်ကြာရှိနေတာတောင် ကြိုက်လို့မရသေးဘူး။ ၀ိုင်ခွက်ရဲ့တစ်ဝက်တောင် မသောက်နိုင်ဘူး။ ၀ိုင်နီကိုတော့ တစ်ခွက်လောက် သောက်နိုင်သေးတယ်။ ၀ိုင်ဖြူကတော့ သူ့သောက်ပြီးရင် aggressiveဖြစ်ချင်လာလို့ နောက် သိပ်မသောက်တော့ဘူး။
၀ိုင်အပြင် တစ်ခြားအရက်တွေပါ စမ်းသောက်ကြည့်ဖူးတယ်။ pflumli, kirsch, tequila, ricard, campari, vodka, Irish whiskeyအမျိုးမျိုး၊ scotch whisky, rum, gin…စတာစတာတွေ။ သောက်တယ်ဆိုတာထက် အနံ့ခံကြည့်၊ လျှာဖျားနဲ့ပဲ အရသာခံကြည့်ပြီး စမ်းသပ်ရုံဆို ပိုမှန်မယ်။ မူးတဲ့ဖီလင်ကို လုံးဝကို မနှစ်သက်လို့။ ပြီးတော့ မူးမှာကို လုံးဝမဖြစ်ချင်လို့။ များများမူးရင် များများအမှားလုပ်နိုင်တယ်လေ။ အဲလိုအဖြစ်မခံဘူး။
အရက်မူးလာရင် လူက ပုံစံနည်းနည်းပြောင်းသွားတယ်။ တစ်ချို့က ရန်လိုလာတယ်။ တစ်ချို့က ပိုပြီးသဘောကောင်းလာတယ်။ တစ်ချို့က ၀မ်းနည်းစိတ်ဖြစ်လာတယ် စသဖြင့်ပေါ့လေ။ ကိုယ်ဘာအမျိုးအစားထဲပါလဲ သိသင့်တယ်။ ကျွန်မက ရန်လိုတတ်တယ်။ တစ်ခါမှတော့ တစ်ခွက်ထက်ပိုအောင် မသောက်ဖူးဘူး။ ဒါပေမဲ့ beginnerအတွက် တစ်ခွက်က လုံလောက်နေသလားမသိ။ တစ်ခါက ၀ိုင်ဖြူလေး ဗိုက်ထဲနည်းနည်းဝင်သွားတာ.. ခေါင်းကထိုးကိုက်လာပြီး ဒေါသထွက်.. အရှေ့က သူငယ်ချင်းကို သေချာကြည့်ပြီး နင့်ခေါင်းကို ငါဒီပုလင်းနဲ့ထုပြီး နင့်မျက်နှာကို ဟောဒီငါ့လက်ဝါးနဲ့ဖြတ်ရိုက်ချင်တယ်ပြောလို့ ယောက်ျားခမျာ အတော်လန့်သွားတယ်။ အဲဒီကစပြီး ၀ိုင်ဖြူကို အရသာပဲစမ်းသပ်ခိုင်းတော့တယ်။
ကိုယ်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကတော့ ကိုယ့်ယောက်ျားပဲ။ သူက ပိုမူးလေ ပိုပြုံးလေပဲ။ ပြုံးနေတာပဲ။ သဘောပိုကောင်းလာတယ်။ အရမ်းပြုံးနေလို့ သိပ်မူးနေတယ်ထင်ပြီး အရက်မူးရင်ကျွဲခိုးပေါ်မှာပဲဆိုပြီး သူ့သွား..စကားမအစ်လိုက်နဲ့။ သူက လူလည်။ ဘယ်တော့မှ မရဘူး။ ပြီးတော့ ရုပ်မပျက်ဘူး။ ကားကို ဖြောင့်တန်းနေအောင် မောင်းနိုင်တယ်။ သူက ၀ိုင်ပဲအဓိကသောက်တဲ့သူဆိုတော့ အရက်ဗိုက်ထဲဝင်နှုန်းက နည်းပြီး နှေးလို့ဖြစ်မယ်။
ဟုတ်တယ် အစ်မရေ …. လင်ယောကျာ်းက သောက်တတ်စားတတ်တဲ့ လူဆိုလျှင် ရှေ့သွားနောက်လိုက်ညီအောင် မိန်းမဖြစ်တဲ့ လူကပါ သောက်တတ်အောင်ကျင့်ကြံသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ် …ကိုယ်မသောက်တတ်လို့ သောက်တတ်တဲ့ လူတွေနဲ့ သွားသောက်မယ်ဆိုလျှင် သောက ဝေရဦးမယ် … အိမ်တောင်ရေးပါ ထိခိုက်နိုင်တာမို့ … အစ်မဆုံးဖြတ်ချက်မှန်တယ်လို့ပဲ ထင်ပါတယ် … ။
မူးယစ်စေတဲ့ အရာမှန်းသိပေမဲ့ … မူးယစ်တဲ့ အရသာကို ကြိုက်လို့ သောက်တဲ့ မိန်းကလေးတွေ ၊ ဆေးဖြစ်ဝါးဖြစ် သောက်တဲ့ မိန်းကလေးတွေ ရှိနေတာမို့ …တားမရတော့လည်း …ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းသောက်လို့ပဲ ပြောချင်ပါတော့တယ် … ။
ပြောမဲ့သာပြောတာ … etone ဘီယာကြိုက်တယ် ၀ိုင်ကြိုက်တယ် .. .၀ီစကီတွေနဲ့ တခြား အရက်ပြင်းတွေကိုတော့ ပွဲလန်းတွေကျမှ မကောင်းတတ်လို့ စတိပဲသောက်တယ် … ။ ဘီယာတွေ ၀ိုင်တွေ မသောက်တတ်တဲ့ ဘဲကို သောက်တတ်အောင် နည်းနည်း သင်ပေးထားတယ် ….။ (သို့သော် သူသိပ်မသောက်နိုင်ပါဘူး … 1ခွက်တောင် အနိုင်နိုင်ရယ် :D ) တစ်ခါတစ်လေ … အထိမ်းမှတ်နေ့တွေ အမှတ်တရနေ့တွေဆို … အေးအေးလူလူ ညစာစားပြီး နည်းနည်း ၀ိုင်သောက် ၊ ဘီယာသောက်ပြီး စကားတွေပြောဖြစ်တယ် … ။ အလုပ်တွေများပြီး စိတ်ဓါတ်တွေကျနေတဲ့ အချိန်ဆို အကောင်းဆုံး ကုသနည်းပဲလို့ ထင်မိတယ် … ။
တုံးတုံး…… ဂလောက်သိရရင် ဒလောက်ကြိုက်တာ သိဘီ ဒီနေ့နေ့စွဲနဲ့ ..တို့ထားလိုက်..
ဘဆွေထံမှ ရရန်ရှိ( ကြိုက်တဲ့ဟာရေး )တစ်လုံးဆိုပြီး မှတ်ထား …..ဒိူင်ယာယီမှာ…
အခုနောက်ပိုင်း နံမည်ကြီးနေတဲ့ ရိုဇေး သောက်ချင်လဲရတယ်…..တုံးတုံးရဲ့ အရက်အပေါ် ထားတဲ့ အမြင်နဲ့ နှစ်သက်မှကိုဖတ် ပြီး အရမ်းနဲ့မှကို တိုက်ချင်သွားတယ်…
ဘ ဗကေးရှင်းရရင် ဆွဲလာခဲ့မယ်..
Wah !!!! စားရကံကြုံတော့ .. မုတ်ဆိတ်ပျားစွဲ … အဲ … စွဲစရာမုတ်ဆိတ်လည်းမရှိ
Thank you ပါ အဘဆွေရေ … ရွာထိပ်က ကျောက်သင်ပုန်းကြီးမှာ သေချာမှတ်ထားလိုက်ပါတယ် အဟဲ …. ။ :D ဗကေးရှင်းမြန်မြန်ရပါစေဗျို့ :D :D
Your offer to E Tone is
only Wine or Beer ???
How about Whiskey I posted photo in
ယောက်ျားက သောက်တတ်စားတတ်တဲ့သူဆိုပေမဲ့ သူသောက်တဲ့ဟာက ၀ိုင်ဖြစ်တာရယ်၊ စားတဲ့အစာတွေက ကြက်သွန်ဖြူတွေပါတဲ့အစာမဟုတ်တော့ သည်းငြီးခံနိုင်တယ်။ နို့မို့ဆို ဘယ်လွယ်မလဲ။ အရက်ပြင်းနဲ့ ကြက်သွန်ဖြူရောတဲ့အနံ့က အင်မတန်ဆိုးတာကလား။ ရန်ကုန်က လူကြပ်တဲ့ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ ကြုံဘူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။
ညီမလေးအီတုံးရေ…အိမ်ထောင်တည်မြဲဖို့အတွက် ခင်ပွန်းနဲ့ရှေ့သွားနောက်လိုက်ညီအောင် သူသောက်လို့ အစ်မလိုက်သောက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ၀ိုင်သောက်တာက အစ်မလုပ်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်တာကြောင့်ပါ။ အစ်မ မလုပ်နိုင်တဲ့အရာဆိုရင် အစ်မမလုပ်နိုင်ကြောင်း သူ့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြီး ပြတ်ပြတ်သားသားငြင်းမှာပါ။ ထပ်ပြီးရေးရရင် ချစ်ခင်ပွန်းနဲ့ရှေ့သွားနောက်လိုက်ညီဖို့အတွက် သူနဲ့ ဘရိန်းလက်ဗယ်ချင်းမကွာအောင်(သူကအလွန်ထက်မြက်တယ်)၊ နှလုံးသားခြင်းပိုနီးစပ်ပြီးနားလည်အောင်ပဲ အစ်မကြိုးစားပါတယ်။
အိမ်တောင်တစ်ခု သာယာခိုင်မြဲအောင် လုပ်ဖို့က မလွယ်ဘူးနော် …… ပါးရေ နပ်ရေ ရှိတဲ့လူတွေ ၊ ကိုယ့် အထက်က လူတွေရဲ့ ပြုမူဆောင်ရွက်ပုံကအစ ၊ စဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံတွေကိုပါ မှတ်သားထားရပါတယ် အစ်မရေ … ။ ဘရိန်းလယ်ဗယ်ချင်း မကွာအောင် လုပ်တဲ့ အချက်ကိုတော့ မေ့နေတယ် .. အစ်မပြောမှ သတိရတယ် .. အခုတော့ အသုံးမ၀င်သေးပေမဲ့ .. နောင်တစ်ချိန် အသုံးဝင်နိုင်တာမို့ … မှတ်သားထားပါတယ် ။
(ပြောမယ့်သာပြောတာ etone က နည်းနည်းပိန်းတယ်.. တခါတလေ နည်းနည်းဝေးတယ် အစ်မရဲ့ )
မြန်မာနိုင်ငံမှာ.. အရက်သောက်တဲ့လူငယ်တွေများတာမပြောနဲ့ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားကြည့်တိုင်း။။ကြော်ငြာကြည့်တိုင်းမှာ အရက်သောက်တဲ့အခန်းမပါရင်မပီးဘူး..
မြန်မာဗီဒီယိုကားတွေဆိုရင်.. တစ်ခုခု စိတ်ညစ်တိုင်း အရက်ဆိုင်ရောက်ရောက်သွားတဲ့အခန်းချည်းပဲ .. စိတ်ညစ်လို့ တခြားနေရာသွားတယ်မရှိဘူး .. အဲဒါကြောင့်လည်း ဒီကလူငယ်တွေ အတုခိုးချင်တိုင်းခိုးနေတာ.. နောက်ပီးတော့ရှိသေးတယ်.. အရက်သောက်တဲ့လူငယ်တွေ အရက်ကြိုက်လောက်သောက် ပီးရင်ဆေးသောက်ရင်ပျောက်ရောဆိုပီး နေတိုးကြော်ငြာတဲ့ . . အသည်းအားတိုးဆေး Lift up ဆိုလားပဲ.. အဲလိုက လူငယ်တွေကို မြှောက်ပေးနေရာ မကျဘူးလား..
Great Post !!!! 405 readers within 1 month
Everything is okay when you know ur limit
ကိုယ့်ခံယူချက်နဲ့ ကိုယ့်အမြင်ကို ပြောတဲ့သဘောပါပဲ။ အဲဒီ ခံယူချက် အမြင်တွေကလည်း ကိုယ် ကြီးပြင်းရာ ပတ်ဝန်းကျင်၊ ဆုံးမပဲ့ပြင်သူရဲ့ ခံယူချက် (လိမ္မာတယ်ဆိုတာလည်း ဆုံးမသူရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်မို့ပါ)၊ အပေါင်းအသင်းနဲ့ ယုံကြည်ရာ ဘာသာတရားတို့ပေါ်မှာမူတည်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်တော့ ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းကို နည်းနည်းပိုသိတော့ တရားတော်ထဲမှာဆိုရင် ဒီလိုမလုပ်နဲ့ လုပ်လည်း ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာတော့ မရှိဘူး၊ ဥပဒေလို ပြစ်ဒဏ်မရှိဘူး၊ ကိုယ်ကြိုက်တာကိုယ်လုပ်လို့ရတယ်၊
အရက်နဲ့ ပတ်သက်ရင်လည်း ဒီအတိုင်းပဲ လူတိုင်း အနည်းဆုံး စောင့်ထိန်းရမယ့် ငါးပါးသီလမှာ နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ သီလ ဟာ နောက်ဆုံးဖြစ်ပေမယ့် အခရာ အကျဆုံးပါလို့ ပြောကြတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ နောက်ဆုံးသီလကျိုးတာဟာ ရှေ့သီလ တွေကို ကျိုးဖို့ပိုလွယ်သွားလို့ပါတဲ့။
အခု အရက်သောက်လို့ အပြစ်တွေကိုလည်းရှင်းပြထားတာလည်းရှိသလို သေလွန်သော် ဆိုတဲ့ဟာလည်း တရားထဲမှာပဲ ရှင်းပြထားတာတွေရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကို လက်ခံတယ် အယုံအကြည်ရှိတယ် ဆိုရင်တော့ ကိုယ်ဘာသာရှောင်ပေါ့။ မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်ရင်လည်း သောက်ပေါ့။ ဟောထားသူကတော့ မြတ်စွာဘုရားပါ။
ကိုးဘွဲ့ရ ဆရာတော် ဟောတဲ့ တရားတော်ကို ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ … ကိုယ်ကြိုက်တာကိုယ်လုပ် ကိုယ်ဖြစ်ရင် ကိုယ်ခံ တဲ့
ထောက်ခံလိုပါတယ် ၊ ကံငါးပါးမှာ တစ်ပါးကံ ကျူးလွန်တဲ့အပြစ်ကလဲ ကြောက်စရာပါ၊
ယောင်္ကျား တွေပဲ သောက်ရမယ် မိန်းကလေးတွေ မသောက်ရ လို့လဲမပါ ပါဘူး၊
စဉ်းစား ချင့်ချိန်ဖို့ လိုမယ်ထင်ပါတယ် ၊ ဒီစကားဝင်ပြောမိလို့ အပြစ်ပြောရင်လဲ ခံယူပါ့မယ်၊
(ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ အတွက်ကို ဆိုလိုခြင်းပါ)
လုံးဝ လုံးဝ မသောက်သင့်ပါ